भारतका असम-त्रिपुरा लगायतमा तनाव, स्थल र हवाई यातायात ठप्प
(191212) -- GUWAHATI, Dec. 12, 2019 (Xinhua) -- Protestors demonstrate against the Citizenship Amendment Bill (CAB) in Guwahati, India, Dec. 11, 2019. The upper house of Indian parliament, or Rajya Sabha, passed the controversial Citizenship Amendment Bill (CAB) Wednesday evening, officials said. (Str/Xinhua)
एजेन्सी, मंसिर २६–नागरिकता संशोधन विधेयकलाई लिएर भारतका पूर्वोत्तरका राज्यहरूमा विरोध बढ्दै छ । धेरै ठाउँमा आगजनीका घटना पनि भएका छन् ।असममा तेस्रो दिन पनि हिंस्रक विरोध प्रदर्शन जारी छ । डिब्रूगढ र गुवाहाटीमा कर्फ्यु लगाइएको छ । राज्यमा सीआरपीएफका दस वटा कम्पनी तैनाथ छन् ।
केन्द्रीय मन्त्री र डिब्रुगढका भाजपा सांसद रामेश्वर तेलीले भने, ‘बुधबार रात लगभग ११ बजे मेरा काकाको पसलमा आगो लगाइयो । मेरो घरको सुरक्षा पर्खाल पनि प्रदर्शनकारीहरूले क्षति र्पुयाएका छन् ।’ उनले असमका मानिससँग शान्ति कायम गर्न अपिल गरेका छन् । असम र त्रिपुरामा प्रदर्शनका कारण खेल प्रतियोगिताहरू रद्द गरिएका छन् । असममा सेनाका पाँच समूह तैनाथ गरिएको छ । असम राइफल्सका समूह त्रिपुरामा तैनाथ गरिएका छन् ।
पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवेले सुरक्षाका कारण असम र त्रिपुरा आउने(जाने यात्री रेलको सेवा रोकेको छ । लामो दूरीका रेल गुवाहाटी रोकिएका छन् । कयौं यात्री गुवाहाटी र कामाख्यामा अड्किएका छन् ।आरपीएसएफका १२ समूह रेलवेको सम्पत्ति रक्षामा खटाइएका छन् । असममा प्रदर्शनकारीले आज बिहान कर्फ्यु उल्लंघन गरे । अखिल असम छात्र संगठन (आसु) ले विरोध प्रदर्शन आह्वान गरेको छ । प्रदर्शनकारीले केही वाहनमा आगजनी गरे । सहरका सावरी साधन फसेका छन् । राज्यका कयौं स्थानमा भाजपा र असम गण परिषद (अगप) का नेताहरूका घरमा पनि आक्रमण भएका छन् ।
नागरिकता संशोधन विधेयक, २०१९ विरूद्ध उच्चतम न्यायालयको ढोका पनि ढक्ढकाइएको छ । इन्डियन युनियन मुस्लिम लिगले मुद्दा दायर गरेको हो । कोलकाता विमानस्थलले कोलकाताबाट डिब्रुगढतिरका सबै उडान रद्द गरेको छ । इन्डिगो एयरले उडान रद्द गर्दै यात्रीलाई वैकल्पिक विमान छान्न वा रकम फिर्ता लिन अनुरोध गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले असमवासीहरूलाई नागरिकता संशोधन विधेयकबाट चिन्तित नहुन आग्रह गरेका छन् । यो विधेयकले कसैको विशिष्ट पहिचान र सुन्दर संस्कृतिमा आघात नपर्ने उनले बताएका छन् । डिब्रुगढमा कर्फ्युको पर्बाह नगरी सडकमा निस्केका प्रदर्शनकारीउपर प्रहरीले फायरिङ गरेको छ । प्रदर्शनकारी अति उग्र भएपछि फाइरिङ गर्नुपरेको प्रहरीले जनाएको छ । फायरिङपछि केही मानिसलाई गोली लागेको छ । घाइतेहरूलाई अस्पताल पुर्याइएका छन् ।
नाइजरको सैन्य क्याम्पमा आतंकवादी हमला, ७१ जना मारिए
च्याम्पियन्स लिगमा अपराजित रहँदै रियल प्रिक्वाटरफाइनलमा